| ६:५६:४४ मा प्रकाशित
वि.सं. २०७७ साल फागुन २२ गते । शनिबार .इ.स.२०२१ मार्च ०६ तारिक । शकसंवत् १९४२ । प्रमादी संवत्सर । उत्तरायण । शिशिर ऋतु । नेपाल संवत् ११४१ । फागुन कृष्णपक्ष । तिथी– अष्टमी, २१ बजेर २९ मिनेट उप्रान्त नवमी । नक्षत्र–ज्येष्ठा,२४ बजेर ४८ मिनेट उप्रान्त मूल । योग– बज्र,२१ बजेर २२ मिनेट उप्रान्त सिद्धि । करण–बालव,१० बजेर ३४ मिनेट उप्रान्त कौलव,२१ बजेर २९ मिनेट उप्रान्त तैतिल । आनन्दादिमा–मुसल योग । चन्द्रराशि–बृश्चिक । काठमाडौंमा सूर्योदय बिहान ०६ बजेर २६ मिनेटमा,सूर्यास्त १८ बजेर ०६ मिनेटमा । दिनमान २९ घडी १२ पला ।
मेष (चू,चे,चो,ला,लि,लू,ले,लो,अ):- आफन्त तथा चेलिमाईतीबीच बैमनस्यता बढ्ने ग्रहयोग रहेको छ सचेत रहनुहोला । व्यापार व्यवसायमा समय दिन नसक्दा घाटा लाग्न सक्छ ध्यान दिनुहोला । मायाप्रेममा धोका हुनेछ भने दाम्पत्य जीवनमा घटपट आउनेछ । समय तथा परिस्थिति अनुशार नचल्नाले दुःख पाईने छ । सामान्य स्वास्थमा समस्या आई उपचार खर्च बढेर जानेछ । पढाईलेखाईमा समय दिन नसक्दा अरुभन्दा पछी परिने चिन्ताले सताउनेछ ।
बृष (ई,ऊ,ए,ओ,वा,वी,वू,वे,वो):- एकल तथा साझेदारी व्यापार व्यवसायमा लगानी गरी प्रशस्त नाफा कमाउन सकिनेछ । पढाईलेखाईमा भनेजस्तो नतिजा हात लाग्ने हुनाले आफन्त तथा अग्रजहरु खुशि रहनेछन् । पारिवारिक यात्राका क्रममा स्वादिष्ट भोजन ग्रहण गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ । मायाप्रेममा सामिप्यता बढेर जानेछ भने पतिपत्नीबीच मायाको डोरो कसिलो हुनेछ । सामाजिक सञ्जाल तथा प्रविधिको प्रयोग मार्फत आफ्ना विचारहरु जनमानसमा लैजान सकिनेछ ।
मिथुन ( का,की,कू,घ,ङ,छ,के,को,हा) :- व्यवसायमा प्रशस्त आम्दानी हुने तथा पुराना कारोबारहरुलाई सल्टाउने समय रहेको छ । शत्रुले दुख दिन खोजे पनि अन्तत उनिहरुलाई परास्त गर्दै अगाडी बढ्न सकिनेछ । आफन्त तथा मावली पक्षबाट सहयोगको अपेक्षा गर्न सकिने छ । विवाद तथा न्यायिक निर्णयहरुबाट हुने सुनुवाई तपाईकै पक्षमा हुने हुनाले मन प्रशन्न हुनेछ । पढाईलेखाईमा प्रतिद्धन्द्धिहरुलाई किनारा लगाउदै नतिजा आफ्नो पोल्टोमा पार्न सकिनेछ ।
कर्कट (ही,हू,हे,हो,डा,डी,डु,डे,डो):- अध्ययनमा मन जानेछ भने शिक्षा क्षेत्रमा गरिएको लगानी फस्टाएर जानेछ । स्कुल,कलेज बैक तथा बित्तिय क्षेत्रबाट भनेजस्तो आम्दानी हुनेछ । आफुले मन पराएको मानिसबाट उपहार तथा विलाशी बस्तु प्राप्त हुनेछ । व्यापार प्रशस्त आम्दानी हुनेछ भने नोकरीमा बढवा हुने योग रहेको छ । बंश बृद्धिको योगलाई नकार्न सकिदैन ।
सिंह (मा,मी,मू,मे,मो,टा,टी,टू,टे):- घरायसी समस्या एक्कासी बढ्नाले अर्थ अभाव हुनेछ । आमा तथा आमासँग टाडिएर यात्राको तय गर्नुपर्दा मन खिन्न हुनेछ भने आफन्तको साथ पाईने छैन । कृषि तथा सहकारी व्यवसायमा भने मनग्गे आम्दानी हुने योग रहेको छ । समाजसेवामा तथा राजनीतिमा पदको दुरुपयोग गर्दा मान सम्मानमा दाग लाग्न सक्छ ध्यान दिनुहोला । अध्ययनमा समय दिएपनी नतिजाको लागी केही समय कुर्नु नै पर्नेछ ।
कन्या ( टो,पा,पी,पू,ष,ण,ठ,पे,पो ) :- मायाप्रेममा सामिप्यता बढेर जाने तथा मिल्ने साथिको सहयोगले कामहरु बन्नेछन् । रोकिएर बसेका कामहरु बन्नुको साथै बिस्तारै नयाँ काम बन्नेछन् । पढाईलेखाईमा सुधार गर्दै सफलताको नजिक पुग्न सकिनेछ । छिमेकिहरु माझ राम्रो कामगरी प्रशिद्धी कमाउन सकिनेछ । सामाजिक सम्बन्धहरु सुदृड भएर जानेछन् भने दाजुभाई तथा बन्धुबान्धबको सहयोग पाईने हुनाले जोसिलो काम गर्ने जागर आउनेछ । सानो प्रयत्नले राम्रो काम गरी फाईदा लिन सकिनेछ भने प्रतिस्पर्धिहरु परास्त हुनेछन् ।
तुला ( रा,री,रु,रे,रो,ता,ती,तू,ते ) :- सबैको सहयोग पाईने हुँदा प्रतिष्ठित काम गर्ने अवसर जुर्नेछ । बोलेर गर्ने कुनैपनि पेशा व्यवसाय फस्टाएर जानेछ । समय अनुशार विचार सिर्जना गर्न सकिने हुँदा धेरैको मन जित्न सकिनेछ । कुटुम्ब तथा आफन्तसँग मिलेर गर्ने कुनै पनि व्यवसाय फस्टाएर जानेछ भने आर्थिक अवस्थामा सुधार भएर जानेछ । प्रेममा रमाउन चाहनेहरुका लागी समय राम्रो रहेकोछ । गित संगित तथा मोडलिङ पेशा व्यवसायबाट भनेजस्तो आम्दानी हुनेछ ।
बृश्चिक ( तो,ना,नी,नू,ने,नो,या,यी,यू ) :- वन्द व्यापारबाट मनग्गे लाभ लिन सकिनेछ भने आस मारेको काम बन्नाले उत्साह जाग्नेछ। एउटै कामबाट दोहोरो लाभ मिल्नेछ। आफन्त तथा साथिभाईहरुको सहयोगमा विशेष योजनाहरू बन्नेछन्। छिमेकि तथा समुदायको हितमा राम्रै काम गर्न सकिनेछ। सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्दै फाइदा हुने काम र जिम्मेवारी हात पार्ने मौका छ। प्रेममा रमाउन चाहनेहरुका लागी समयले साथ दिनेछ ।
धनु ( ये,यो,भा,भी,भू,ध,फा,ढा,भे ): – प्रशासन तथा राज्य पक्षसँग सम्बन्धीत काम गर्दा ध्यान दिनुहोला समय मध्यम रहेकोले समयमा काम नबन्ने तथा बिभिन्न अवसरबाट बञ्चित हुने योग रहेको छ । गलत काम तथा क्रिर्याकलापलाई प्रश्रय दिनाले ईज्जत तथा प्रतिष्ठामा दाग लाग्न सक्छ । पढाईलेखाईमा मन नजादा अरुभन्दा पछी परिनेछ । माया प्रेममा धोका हुनेछ भने जीवन साथिसँग अनावश्यक विवाद हुन सक्छ ध्यान दिनुहोला ।
मकर ( भो,जा,जी,जू,जे,जो,ख,खी,खू,खे,खो,गा,गी) :- कृषि तथा पशुपालन व्यवसायमा लगानी गरी मनग्गे आम्दानी गर्न सकिनेछ । खनिज पदार्थ तथा पानीसँग सम्बन्धीत कामबाट भनेजस्तो आम्दानी हुनेछ । शिक्षा तथा बैकसँग सम्बन्धीत कामबाट भनेजस्तो आम्दानी हुनेछ । प्रणय सम्बन्धमा नजिक हुने समय रहेको छ भने जीवन साथिको सहयोगले राम्रा काम गर्न सकिनेछ । ईच्छा, आकांक्षा तथा मनोकामना पुरा हुनेछन् । सामाजिक सञ्जाल तथा प्रविधिको प्रयोग मार्फत आफ्ना विचारहरु जनमानसमा लैजान सकिनेछ ।
कुम्भ (गू,गे,गो,सा,सी,सू,से,सो,दा ):- पढाईलेखाईमा उच्च स्तरको सफलता हात लाग्नेछ भने प्राबिधिक शिक्षामा समय खर्चिनेहरुले राम्रो प्रगती गर्न सक्नेछन् । कृषि तथा पशुपालन व्यवसाय फस्टाएर जानेछ भने अग्रजहरुको सम्पती प्रयोग गर्न पाईनेछ । नविन विचारको प्रयोग मार्फत व्यवसायलाई बढाउन सकिनेछ । राजनीति तथा समाजसेवामा जनताको साथ तथा समर्थन रहनेछ भने कार्यक्षेत्रमा तपाईको कामको उच्च सम्मान गरिनेछ ।
मीन (दी,दू,थ,झ,ञ,दे,दो,चा,ची):- धार्मिक तथा आध्यात्मक क्षेत्रमा मन जानेछ भने धार्मिक क्षेत्र मन्दिर तिरको यात्रा गर्न सकिनेछ । पढाईलेखाईमा मन जानेछ भने खोज तथा अनुसन्धानको क्षेत्रमा भनेजस्तो नतिजा हात लाग्नेछ । आम्दानी र खर्चको सन्तुलन मिलाएर व्यवसाय गर्न सक्दा थप लगानी गर्न सकिनेछ । नयाँ काम पाउने तथा राम्रो स्थानमा स्थानान्तरण हुने योग रहेको छ । पुराना काम सफलता पुर्वक सम्पन्न हुने हुनाले मन प्रशन्न हुनेछ । सानो सानो प्रयत्न गर्दा पनि मनग्गे आम्दानी हुनेछ भने व्यापार व्यवसाय फस्टाएर जानेछ । तपाईको दिन शुभ रहोस् ।
अनलाइन कक्षाका लागि शहरमै राम्रो पूर्वाधार छैन ५ मिनेट पहिले
आईएलओको पैसामा एमाले भातृसंस्थाको मस्ती, को को परे कारवाहीमा ? ९ मिनेट पहिले
सिभिल बैंकको कामू सीईओमा पोखरेल नियुक्त ११ मिनेट पहिले
अझै खुल्न सकेनन् म्याग्दीका बन्द चिज उद्योग २३ मिनेट पहिले
टीकापुरमा आगोले पोलिएका १७१ को निशुल्क शल्यक्रिया ३० मिनेट पहिले
विद्यालय बन्द गर्ने लगायत सीसीएमसीका प्रस्तावहरू परिमार्जनसहित पारित ३१ मिनेट पहिले
२३ वर्षअघि सामूहिक लगानीमा किनेको डोजर कवाडी बन्दै ३७ मिनेट पहिले
आईपीएलः आज चेन्नई र राजस्थानको म्याच भिड्दै, यस्तो छ सम्भावित प्लेइङ–११ ४१ मिनेट पहिले
मष्टा पूर्ण खोप सुनिश्चितता गाउँपालिका घोषणा ४६ मिनेट पहिले
५ अर्ब २० करोड बराबरको ट्रेजरी बिल विक्री गर्दै राष्ट्र बैंक ५१ मिनेट पहिले
पर्यटकलाई पाँच स्थानबाट पाटन अवलोकन गराइने ५३ मिनेट पहिले
सिभिल बैंकका सीईओ गुरुङको राजीनामा स्वीकृत ५७ मिनेट पहिले
गरिमाको यादमा भिमको ओ माई लर्ड २० घण्टा पहिले
दाङमा यस वर्ष तोरी उत्पादनमा वृद्धि २२ घण्टा पहिले
अब बजारमा सीईडीबी हाईड्रोपावरको आईपीओ भर्न पाइने, २५ लाख कित्ता शेयर निष्काशन गर्न दियो बोर्डले अनुमति ४ दिन पहिले
नेपालमा २४ घण्टामा थप ५५९ जना संक्रमित ७ दिन पहिले
मध्यपहाडी आयोजनाको काम असारभित्रै सम्पन्न हुने ३ दिन पहिले
आगलागी नियन्त्रणका काममा सेनाको सक्रियता ६ दिन पहिले
राष्ट्रका लागि योगदान पुर्याएकालाई राष्ट्रपतिद्धारा विभूषित ५ दिन पहिले
आवाज विहिनको आवाज ४ हप्ता पहिले
नयाँ बर्षमा पूर्वराजाको शुभकामना: फुटेर हैन, जुटेर शक्ति संरक्षण गर्न’ आग्रह ५ दिन पहिले
क्लियरिङ्ग हाउसको अध्यक्षमा मानन्धर चयन ४ हप्ता पहिले
क्रिप्टोकरेन्सी बजार तिब्र गतिमा वृद्धि, बजार मूल्य झण्डै २० खर्ब डलर ६ दिन पहिले
ताप्लेजुङबाट अचानक किन फर्किए ओली ५ महिना पहिले
मोरङमा खुल्यो प्रभु बैंकको एक्स्टेन्शन काउन्टर १ वर्ष पहिले
ट्राफिक अपडेट : कहाँ- के भयो ? २ वर्ष पहिले
विश्वभर कोरोनाबाट ७३ लाख संक्रमित, ४ लाख १३ हजार भन्दा बढीको मृत्यु १० महिना पहिले